एक्कासी सुनको भाउ किन घट्यो ? हेर्नुहोस आज कतीमा कारोवार हुदैछ – ramechhapkhabar.com
एक्कासी सुनको भाउ किन घट्यो ? हेर्नुहोस आज कतीमा कारोवार हुदैछ
साताको दोस्रो दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ । सुन आज ८ सयले घटेको हो । आइतबार २ हजार ३ सयले घटेको थियो ।
गत हप्ता आइतबार स्थिर रहेको सुन सोमबार प्रतितोला ८ सयले बढेको थियो । मंगलबार ११ सयले बढेको थियो । बुधबार ३ सयले बढेको सुन विहिबार १३ सयले घटेको थियो । शुक्रबार पनि सुन एक सयले घटेको थियो ।
आज सुन प्रतितोला ९२ हजार २ सय रुपैंयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ७ सय कायम गरिएको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । आज चाँदी ४० रुपैंयाँले घटेको छ । १ हजार २३० रुपैंयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धि चुलियो, नियमन छैन
काठमाडौँ — दसैंअघि भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँ थियो । लगत्तै मूल्य बढेर १ सय ६३ रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै अहिले प्रतिलिटर १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।